खप्तडको गंगादशहरा मेला : प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम संगम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भूमिराज 'पिठातोली' , २८ जेठ २०७६
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र ‘भू–स्वर्ग’को उपमाले चिनिएको खप्तडमा शनिवारदेखि गंगादशहरा मेला (जात्रा) सुरु भएको छ। विशेष गरी मंगलबार र बुधबार लाग्ने गंगादशहरा मेलामा विभिन्न संघ संगठनहरुले कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्।
डोटी उद्योग वाणिज्य संघले वर्षेनी आयोजना गर्दै आएको गंगा दशहरा मेलामा खुला पूरुष भलिवल, घोडा दौड र सुदूरकै संस्कृतिको रुपमा चिनिएको डेउडा प्रतियोगिता यसपटक पनि आयोजना गरिएको छ।
गंगादशहरा मेलामा करिब ५० हजार तीर्थालुहरुले वर्षेनी जाने गर्छन्। सुदूरपहाडका चार जिल्लाहरु बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम र डोटीको केन्द्र बिन्दुमा पर्ने खप्तड नेपालकै सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रहरुमध्येको एक हो।
खप्तड एक प्रकृतिको अनुपम उपहार हो – जहाँ आँखाले नभ्याउने विशाल फाँटहरु, हिउँदमा सेताम्मे र बसन्त ऋतुमा रंगीविरंगी फूलले छपक्कै छोपेका मैदानहरु, अझ भनौं स्वर्गकै एक टुक्रा खसे जस्तो । हिउँदको बेला बाक्लो हिउँमा पहिलो पटक टेक्दा त धर्तीको स्वर्गमा पुगे झैं अनुभूति हुने ठाउँ।
२२ पाटन र ५२ झोती भनेर पनि चिनिने खप्तडमा खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, खप्पर दह, शिव मन्दिर, सहस्रलिंग, गणेशस्थान, नागढुंगा, माइका थान, छिन्तेढुंगा, केदारढुंगा, डाँफेकोट, सीता पाइला, घोडादाउन पाटन, नाचन्थली, बलेमेला, पाटन जेठी बहुरानी ढुंगा, भलाउने पाटन, जस्ता धार्मिक स्थलहरुले खप्तड क्षेत्रलाई विशिष्ट बनाएका छन्।
यी क्षेत्र तथा स्थानहरुको पनि आ–आफ्नै महत्व छ। जसले आम जनमानसलाई लोभ्याइराख्छन्। २२ पाटन, २५ मैदान र ५२ वटा थुम्काहरु (झोती)। यसले खप्तडलाई अझै उचाइमा पुर्याएको छ।
पौराणिक कालमा सिद्घ तथा ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेको यस क्षेत्र ‘खेचरादी’ पर्वतका रुपमा समेत वर्णन गरिएको छ। खेचरादी पर्वतको नाम बिस्तारै खप्तड रहन गएको भन्ने जानकारहरु बताउँछन्। पौराणिक कालमा कौरव र पाण्डवको युद्घ हुँदा पाण्डवहरुले चौध वर्ष वनबास बस्दा केही समय खप्तडमा बिताएको किम्वदन्ती रहेको छ। खप्तडमा दोस्रो नम्बरका पाण्डव भीमले हलो जोत्दा फालीले फ्याँकेको माटोबाट थुम्का (झोती) बनेका भन्ने पनि किम्वदन्ती रहेको छ।
‘गंगा दशहरा मेलामा जाऔं, खप्तडका सुन्दर फाँटहरु घुमौँ, त्रिवेणीमा स्नान गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष भव्य रुपमा मेला लागिरहेको छ।
मेलामा खप्तड एउटा धार्मिक तथा सौन्दर्यको केन्द्रबिन्दु मानिएको हुँदा जाँडरक्सी तथा माछामासुको परिकार बिक्री गर्नुहुदैन भन्ने धार्मिक मान्यता रहेपनि बिगतका केही वर्षमा जाँडरक्सी तथा माछामासुले खप्तडको गरिमा घटाएको स्थानीयहरु दाबी गर्छन्। स्थानीय ४ जिल्लाका तीर्थालुहरुले नै मेलामा जाँडरक्सी, बलात्कार, गुण्डागिर्तीजस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न सकेमा तीर्थालुको संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ।
गंगादशहरा मेलामा जाने तीर्थयात्रीहरु गंगादशहरा मेलाका दिन त्रिबेणीमा नुहाँउदा पाप पखालिने, पित्रृलाई तर्पण दिदा पित्रृले मुक्ति पाउने र स्वर्ग जाने, मनको ईच्छा पुरा हुने गाढा बिश्वास रहेकोले यो मेलाको आकर्षण बढेको हो।
वर्षको एक पटक खप्तडमा गंगा दशहरा मेला र इन्द्रजात्रा मेला लाग्ने गर्छ। जेठ÷असार महिनामा गंगा दशहरा र साउन/भदौमा खापरदहमा ठूलो इन्द्रजात्रा मेला लाग्ने गर्छ। त्रिवेणी नदीमा स्नान गर्नुका साथै सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध हुड्के नाच हेर्न स्थानीयवासी जम्मा हुने गर्छन्। सुदूरपहाडको देउडाले रातभर मेला नै गुञ्जायमान हुन्छ।
बिस २०४२ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएदेखि प्रचारप्रसारका साथ खप्तडले पर्यटकलाई आफुतर्फ आकर्षित गर्दै आएको छ। समुद्र सतहबाट २४ सयदेखि ३७ सय मिटर उचाई र दुईसय २५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
२ सय भन्दा बढी प्रजातिका फूल, बहुमुल्य जडिबुटीका साथै कस्तुरी, मृग, बँदेल, डाँफे जस्ता जंगली जनावर तथा पँक्षीको सुरक्षाका लागि २०४७ सालमा नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गरिएको बताइन्छ।
वि.सं २००२ साल बझाङ्गी राजा रामजगं सिहंको अगुवाइमा भू–स्वर्गकाका जंगलमा तपस्या गरेको र त्यसपछि खप्तडलाई देवभूमिका रुपमा रहेको बताउँदै देश विदेशमा यसको महत्व र धार्मिक पर्यटनको महत्वबारे प्रचार/प्रसार गरेपछि यस ठाउँको महिमा र सुन्दरताले व्यापक चर्चा पायो।
कसरी जाने/पुग्ने खप्तड ?
देशको राजधानी काठमाडौंबाट करिब १५ घण्टाको समयमा बसमा धनगढीको अत्तरिया पुगिन्छ। हवाइजहाजमा पनि धनगढीसम्म जान सकिन्छ। अत्तरियाबाट खप्तड जानलाई बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटीबाट जाने प्रबेशद्वार बनाएका छन्। तर पनि खप्तडबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सहर बझाङ्ग छान्नाको मेल्तडी पर्छ। किनकी मेल्तडीसम्म नै गाडी जान्छ। त्यहाँबाट खप्तड जान जम्मा अढाइ घण्टा मात्र समय लाग्छ।
त्यस्तै बाजुराबाट पनि सडकबाट करिब सात आठ घण्टा बराबर समय लाग्छ। त्यस्तै अछामबाट खप्तड जाने हो भने पनि सबारीसाधन पुग्ने ठाउँबाट करिब चाररपाँच घण्टा समय लाग्छ भने डोटीबाट खप्तड जाने हो भने मुल प्रबेशद्वार झिग्रानाबाट सात घण्टामा खप्तड पुगिन्छ।
कति खर्च, समय लाग्छ ? के–के चीज बोकेर जान आवश्यक हुन्छ ?
काठमाडौंबाट खप्तड पुग्न, घुम्न र फर्कन धेरै खर्च भने लाग्दैन। काठमाडौंबाट हवाईजहाजमा जाने हो भने चार हजारदेखि ८ हजारसम्मको टिकट लाग्छ, धनगढी पुग्न मात्र। बसमा जाने हो भने १५ सयमा कैलालीको अत्तरिया बजारसम्म गाडीभाडा लाग्छ। बसमा समय १५ घण्टामा अत्तरियामा पुगिन्छ।
खप्तडको मौसम पानी पर्यो भने सहनै नसक्ने जाडो हुन्छ। क्षण क्षण मै मौसम परिवर्तन हुन्छ। १० मिनेट अगाडि घाम लागेका देखिन्छ भने कहिलेकाही १० मिनेटमै पानी पर्ने गर्छ। पानी परेमा ती रमाईला फाँटहरु एकैछिनमा जलासयमा परिणत हुन्छन्। किनकी खप्तडको पानी जमिनमा भिज्दैन्। सबै बगेर जान्छ।
साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका चार जिल्लाको संगमस्थलमा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्य पहाडी वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको प्रतिनिधित्व गदर्छ। यस निकुञ्जमा सल्ला, खसुर र निगालाका जगंलहरूका साथै वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त घाँसे मैदान रहेका छन्। यहाँ पाइने वन्यजन्तु तथा सुन्दर चराचुरुङ्गीहरूको प्रधानता रहेको छ। खप्तडबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सहर बझाङ्गकाे खप्तड छान्नालाई मानिन्छ।